Shiinaha 3T warshad mashiinka barafka jaban iyo alaableyda | Nidaamka Barafka ee Herbin
Heerkeyga 3T / maalin ee barafka jilicsan waxaa ku qalabeysan 1500kg weelka barafka lagu keydiyo. Qashin-barafkaasi wuxuu keydin karaa 1500kg oo jajab baraf ah. Macaamiilku wuxuu kaloo dooran karaa haanta weyn ee barafka lagu keydiyo, ama qolka barafka. Qolka barafka waa weyn oo ku filan in lagu keydiyo dhammaan barafleyda lagu sameeyo waqtiga habeenkii mashiinka barafka ee 3T / maalin.
Waxaan u adeegsan doonnaa qaab bir ah si aan u taageerno mashiinka barafka, iyo birta birta ah waxay qaadi doontaa dhammaan culeyska mashiinka barafka. Qolka barafka wuxuu ku yaalaa mashiinka barafka ka hooseeya. Qaboobaha barafku wuxuu ku dhacaa qolka barafka oo si toos ah ayuu gudaha loogu ilaaliyaa
Halkan waxaa ku yaal sawirka qaabeynta si aan u muujiyo mashiinkeyga 3T / maalin ee barafka jilicsan oo leh qolka barafka.
Waa kuwan faa'iidooyinka ugu waaweyn ee mashiinadayda barafka ee 3T / maalin.
1. Faa’iidada ugu weyni waa awood badbaadin.
Inta badan mashiinka barafka jajaban ee tamarta badbaadiya ee Shiinaha.
Ka duwan warshadaha kale ee mashiinka barafka, nidaamyada Herbin Ice waxay soo saaraan uumi bixiyeyaal baraf u gaar ah waxaanan u isticmaalnaa waxyaabo gaar ah si loo hagaajiyo waxtarka.
Maaddada loo yaqaan (Patented), Chromed alloy alloy, ayaa loo isticmaalaa samaynta uumi-bixiyeyaasha, sidaa darteed waxay leeyihiin habka ugu wanaagsan ee kuleylka.
Biyaha si fudud ayey u qaboojinayaan sababtoo ah uumi-baxa kuleylka kuleylka ku fiican.
Qaybaha qaboojiyaha yaryar ayaa loo isticmaali karaa sameynta mashiinno baraf dabacsan oo isku mid ah marka la barbar dhigo kuwa kale.
Koronto yar ayaa loo isticmaalaa sameynta isla qiyaasta barafka.
Aynu ku xisaabino mashiinka barafka ee 3T / maalin.
Biyaha kale ee Shiinaha ee la qaboojiyey mashiinnada barafka ee flake-ga ah waxay cunaan 105KWH koronto si loo sameeyo 1 tan oo kasta oo baraf ah.
Mashiinadayda barafka jaban waxay cunaan 75KWH oo koronto ah oo keliya si ay u sameeyaan 1 tan oo kasta oo baraf ah.
Haddii macaamilku doorto mashiinkeyga barafka ee 3T / maalin, wuxuu keydin doonaa 328,500 KW koronto 10 sano gudahood.
Haddii macaamilku doorto mishiinka kale ee tikniyoolajiyadda miskiinka ee miskiinka xun, wuxuu lacag badan ku bixin doonaa inuu ku bixiyo isticmaalka korantada dheeriga ah ee aan macnaha lahayn, 328,500 KWH.
Immisa ayey le egtahay 328,500 KW koronto ee dalkaaga?
328,500 KW koronto ayaa qiyaastii US $ 45,000 ku jirta magaaladeyda.
2. Tayo wanaagsan oo leh dammaanad dheer.
80% ka mid ah waxyaabaha ku jira mashiinadeyda barafka ayaa ah noocyo caan ah oo caalami ah Sida Bitzer, GEA Bock, Danfoss, Schneider, iyo wixii la mid ah.
Kooxdayada wax soosaarka xirfadeed iyo khibrada leh waxay si buuxda uga faa'iidaystaan ​​qaybaha wanaagsan.
Dammaanadda nidaamka qaboojiyaha waa 20 sano. Haddii nidaamka qaboojiyaha waxqabadkiisa shaqeynaya uu isbeddelo oo uu noqdo mid aan caadi ahayn 20 sano gudahood, annagaa bixin doonna.
Ma jiraan qaybo qaboojiye ah oo burburaya 12 sano. Oo ay ku jiraan kombaresarada / kondenser / uumiye / balaadhinta ves.
3. Waqtiga dhalmada degdega ah.
Hore: 5T mashiinka barafka flake
Xiga: 2T mashiinka barafka flake